Kyaw Win – Min Thayt
Tag: Kyaw Win
Articles Literature Papers Perspective Politics
ကျော်ဝင်းရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရင်၊ တစ်ခုတည်းသော အမှတ်သရုပ်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်လို့ရမယ် မထင်ပါ။ အပိုင်း ကဏ္ဍအလျှောက်၊ ဖြစ်တည်ခဲ့တာတွေ ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ပန်းစကြာမှန်ပြောင်းကို တစ်ဖက်ချင်းလှည့်ကြည့် သလို မျက်နှာစာတစ်ခုချင်းစီကြည့်မှ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျော်ဝင်းဟာ …. နိုင်ငံရေးသမားလား / တော်လှန်ရေးသမားလားစာရေးဆရာလား / သုတေသီလား ကျော်ဝင်းဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးလို့ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ပြောချင် ပြောနိုင်တယ်။ သို့သော်လည်း...
ကျော်ဝင်းညွှန်းသော မြန်မာစာအုပ်များနှင့် နိုင်ငံတကာစာအုပ်များ
ရေးသားနေဆဲ - ကျော်ဝင်းလေ့လာချက် စာအုပ်မှ / • ကျော်ဝင်းဟာ စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို အညွှန်းရေးခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး သူမြင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တို့ထိ ရေးသားပါတယ်။ အဲသည့်လို ရေးသားချက်တွေထဲမှာ တချို့ကို တို့ရုံ တို့တယ်။ တချို့ကို ထိရုံ ထိတယ်။ တချို့ကို သဘောထား ထင်မြင်ချက်တွေ ပေးတယ်။ တချို့ကျတော့...
ကျော်ဝင်း (၁၉၅၂ – )
Min Thayt November 11, 2020 November 11, 2020
• ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား။• စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့ဇာတိ။• မွေးချင်း (၇) ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား။• မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်။• ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ• တော်လှန်ရေး၌ ပါဝင်ခဲ့သူ• လက်နက်ကိုင်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ဖူးသူ• နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘဝကို လျှောက်ခဲ့ရသူ• သပိတ်ခေါင်းဆောင်• ကျူရှင်ဆရာ• နိုင်ငံရေး သုတေသီ• ဂလိုဘယ် အိုင်ဒီယာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသူ• ဘာသာပြန်သမား• စာရေးဆရာ•...
Audio Books Book Review Politics
Min Thayt December 30, 2018 August 7, 2019
စာညွှန်း / တော်ဖလာနှင့် စကားစမြည် ၊ ကျော်ဝင်း ။ စာအုပ္အညႊန္း Audio Book တော်ဖလာနှင့် စကားပြောရတာ မောသွားသည်။ တော်ဖလာက လူမှုဗေဒသမားပီပီ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကြောင်းကို လူပိန်းနားလည်အောင် ရှင်းသွားသည်။ မေးသမျှကို ဖြေ၍၊ ‘မုချများ’ ကို ရှောင်သွားသည်။ နောက်လာမည့် အနာဂတ်သည် မုချများ အရာမရောက်တော့မည့် ခေတ်ဆိုတာကို အတပ်နားလည်နေသည့်...
Min Thayt September 25, 2018 August 7, 2019
စာညွှန်း/ အဂတိလိုက်စားမှု (အကြောင်း၊ အကျိုးနှင့် ကုထုံးများ) ၊ ကျော်ဝင်း မူရင်း - Corruption: Causes, Consequences and Curse by U Myint စာအုပ္အညႊန္း Audio Book မူရင်းစာတမ်းရှင်က ဦးမြင့်။ မြန်မာပြည် စီးပွားရေးပညာရှင်ထဲက ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက်။ ဆရာကြီးက အသက်ကြီးပြီ။ ဒီစာတမ်းကို ရေးခဲ့တာလည်း...